स्वर्णपदकधारीलाई जिन्दगीले माटोको पदक पनि दिंदैन « रिपोर्टर्स नेपाल
ओशो रजनीश : आधुनिक शिक्षक कस्तो हुनुपर्छ ? प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ, तर यसको उत्तर दिन भने सजिलो छैन । किनभने आजभन्दा अगाडि संसारमा शिक्षक छँदै थिएनन् । शिक्षकको उपस्थिति नै आधुनिक कुरा हो । शिक्षकको काम व्यवसाय भएको नै आधुनिक सभ्यतामा हो । पहिला पनि गुरुहरू थिए, तर तिनीहरू आधुनिक शिक्षकहरूभन्दा निकै भिन्न थिए । शिक्षण उनीहरूको पेशा थिएन, उनीहरूको आनन्द थियो । अहिलेको संसारमा शिक्षण व्यवसाय बनेको छ । त्यसको परिणाम के भएको छ भने शिक्षण संस्थाहरू फ्याक्ट्री र कारखानाहरू जस्ता भएका छन् ।
पहिला हमेसा बाउ छोरोभन्दा ज्ञानी हुन्थ्यो, किनभने ज्ञान अनुभवबाट मात्रै मिल्दथ्यो । एउटा मान्छे असी वर्ष बाँचेको थियो भने ऊसँग ज्ञान हुन्थ्यो । तर आज हालत धेरै फेरिइसकेको छ । आज उमेरसँग ज्ञानको कुनै सम्बन्ध रहेको छैन । बाउभन्दा बढी छोरो जानकार हुने सम्भावना धेरै बढी छ । किनभने बाउको जान्ने क्रम कहीँ रोकिएको होला र छोरो अहिले पनि जानिरहेको छ । र, बाउले जे जानेको थियो ती सब ज्ञानहरू बद्लिइसकेका छन् । फलतः बाउका खुट्टा पनि कामेका छन् र शिक्षकका खुट्टा पनि कामेका छन् । आज कसैले पनि पहिला जन्मिएको कारण अरू माथि आफ्नो कुरा थोपर्न सक्दैन । यसैले आधुनिक शिक्षकलाई धेरै विनम्र हुनुपर्ने बाध्यता छ । पहिला विनम्र शिक्षकले हुनुपर्दैनथ्यो विद्यार्थीले मात्र विनम्र हुनुपथ्र्यो । शिक्षक अविनम्र नै थियो, निकै जर्कट्टो थियो । ठूलो अहङ्कारले भरिएको थियो ।
पुरानो व्यवस्था एउटा निकास नभएको दहजस्तो थियो । नबग्ने पानी, त्यहीँ जम्थ्यो, कुहिन्थ्यो । घाममा वाफिन्थ्यो र गन्हाउँथ्यो । नयाँ मनुष्यले त्यस तलाउका किनाराहरू भत्काइदिएको छ र त्यसले नदीको रुप लिएको छ । यो रराम्रो कुरा हो । तर नदीबाट हामीले तलाउको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ । तलाउ बन्द भएर एकै ठाउँमा बाँच्दथ्यो, नदी दिनहुँ किनारा बद्लिरहन्छ । दिनहुँ किनारा बद्लिन्छ र पानी बगेर जान्छ । गङ्गा हिजो जहाँ थियो, आज त्यहाँ छैन । भोलि कहाँ हुनेछ, त्यसको हामीलाई पत्तो छैन ।
आज पहिलो पटक मनुष्यको चेतना नदी बनेको छ र दिनहुँ अज्ञाततिर दौडिँदै गइरहेछ । शिक्षकको काम थियो– थाहा भएको कुरा बताउनु । अहिलेसम्म तलाउको संसार भएको ले सबै ज्ञात थियो । हजारौं वर्ष देखि त्यही किनारा थियो, उही वृक्षहरू थिए, उही माछाहरू थिए, उही सूर्य थियो । सब बन्द थियो । यसैले शिक्षक ज्ञान दिने काम गथ्र्यो । पुरानो शिक्षकको महत्वपूर्ण काम थियो–बच्चाहरूलाई ज्ञान दिनु । नयाँ शिक्षकको महत्वपूर्ण काम ज्ञान दिनु मात्र हुने छैन, बरू अज्ञातको बोध गराउनु पनि हुनेछ । किनभने बच्चाहरू भोलि त्यहाँ हुनेछन्, जहाँ हामी कहिले पनि थिएनौं । यदि हामीले उनीहरूलाई अतीतको ज्ञान मात्रै दियौँ भने हामीले उनीहरूलाई भविष्यको बालुवा माथि उभिन समर्थ बनाउन सक्नेछैनौँ ।
के सूचना दिनु नै शिक्षाको काम हो ? त्यसबाट शिक्षा पर्याप्त हुन्छ ? ध्यान रहोस्, सूचना र ज्ञानमा धेरै फरक छ । सूचना त्यो हो, जुन बाहिरबाट प्राप्त हुन्छ र ज्ञान त्यो हो जुन हामीभित्रबाट आउँछ । अब सूचनाका भरमा मात्र काम चल्दैन । युरोप र अमेरिकामा कलेज र कलेजका कक्षाहरू छोडेर हिँडेका लाखौं युवा–युवतीहरू भनिरहेका छन्, ‘यदि यस्तै हो भने हामीलाई यसको खाँचो छैन । हामीलाई सूचनाले मात्र पुगेन, ज्ञान चाहियो । अनि उनीहरू ज्ञानको खोजीमा चाहिने नचाहिने, अनेक थरिका प्रयोग गरिरहेका छन् । नानाथरिका लागूपदार्थ लिइरहेका छन्, समाधि पनि लगाइरहेका छन्, ध्यान पनि गइरहेका छन्, कुनै गुरुको पछि लागिरहेका पनि छन्, उनीहरू अनेक गरिरहेका छन् । उनीहरू भन्छन्– हामी यदि यी सूचनाहरूको सङ्ग्रह हौं भने त यो काम कम्प्युटरले नै गरिदिन्छ, यसको लागि मानिसको के खाँचो ?
शिक्षा बाहिर भएका कुरा मान्छेमा खाँद्नु होइन । टिम्बकटू कहाँ छ, मेडागास्कर कहाँ छ, भन्ने कुरा मानिसको खोपडीमा भर्नुको कुनै ठूलो अर्थ छैन । यो काम कम्प्युटरले नै गर्नसक्छ । मानिसलाई ज्ञान चाहिन्छ । ज्ञानको अर्थ हो– मानिसभित्र जे लुकेको छ, त्यसलाई कसरी हुन्छ पूरै बाहिर प्रकट गर्नु , त्यो कसै गरी प्रकट होस् । मानिसभित्र जुन बीज लुकेको हुन्छ, त्यो फूल बनोस् । सिकाएर मात्र पुग्दैन । बच्चा पाँच वर्षको हुँदा देखि हामी सिकाउन शुरु गर्छौं र पच्चीस वर्षसम्म पनि हामी सिकाइरहन्छौं । र, यदि हामीले विश्वविद्यालयबाट निक्लेको पच्चीस वर्षको व्यक्तिको खोपडीको जाँचबुझ गर्यौ भने हामी पाउँछौं– ऊ कुनै बुद्धिमत्ता लिएर आउँदैन, केवल स्मृतिको संग्रह लिएर बाहिर आउँछ । र, यसैले नै अक्सर के हुन्छ भने विश्वविद्यालयले जसलाई स्वर्णपदक दिन्छ, जिन्दगीले उसलाई माटोको पदक पनि दिंदैन । उनीहरू हराउँछन्, उनीहरू कहाँ जान्छन् भन्ने केही पत्तो हुँदैन ।